Ogaden News Agency (ONA) – Gacan Kahadal Culus oo Kadhacay Jaamacada Ambo Oo Khasaare Gaystay.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Shawa ee dhulka Oromia ayaa sheegaya khasaare naf iyo maal leh oo ka dhashay iska hor imaad shalay ciidanka sirdoonka Itoobiya iyo arday ku dhexmaray. Iska hor imaadkan oo ahaa
mid xoog badan ayaa kadhacay Jaamaca Ambo ee Gobolka Shawa, waxaana lagu soo waramayaa in lagu dilay qaar kamid ah ciidanka sirdoonka ee wayaanaha.
Sida xogta ONA soo gaadhay ay xaqiijinayso waxaa subixii hore ee shalay Jaamacada Ambo weeraray ciidanka sirdoonka ee gumaysiga Itoobiya waxayna ciidanku cadawgu weerarkan uga danlahaayeen in ay ku wax yeeleeyaan ardayda udhalatay Orimia ee Jaamaca wax kabarata iyagoo ku andacoonaya in ay ardaydu yihiin mishiinka ka dambeeya kacdoonadan dami la’ 9-ka bilood oo Woyaanaha ku noqday laf dhuun gashay.
Hase yeeshee iskudaygii ciidanka sirdoonka gumaysiga ayaa fashilmay kadib markay ardaydii kala hortageen iska caabin lixaad leh waxaana lagu soo waramayaa in ay ardaydu goobta kudileen labo kamid ah ciidanka sirta ee Itoobiya mid kalana ay ku dhaawaceen, dhimashada iyo dhaawaca ciidanka ayaa yimid kadib markay ardaydu bilaabeen isdifaac ku aadan naftooda iyo sharaftooda.
Dhinaca kale ciidanka gumaysiga oo isu soo habar wacday ayaa dhibaatooyin jidh dil iyo xadhig ah ugaystay ardaydii Jaamacada Ambo ee dagaalku kudhex maray iyaga iyo ardayda waxaana lagu soo waramayaa in uu dagaalkii wali siisocdo siina xoogaysanayo.
Waxaa xusid mudan in ay sirdoonka Woyanuhu jaamacadan Abo ay si ula kac ah dab ay u qabadsiiyeen laba jeer.